Alatsinainy 02 Septambra 2019. – FJKM
Alatsinainy 02 Septambra 2019.
Fandalinana ny Boky 1 KORINTIANA
1 Korintiana 15.51-58
Ambaran’izao Soratra masina izao ny tsiambaratelon’ny fandresena ao amin’i Kristy ho an’izay mino . Hitsena sy hihaona amin’ny Tompon’ny Voninahitra isika.
1-Hitafy ny tsy fahalovana mandrakizay
Miomàna hitsena ny Tompo . Ny lamba na ny akanjo hoentintsika mitsena ny Tompo dia ny tsy fahalovana mandrakizay na ny maty na mbola velona izany (and51-52). Fahefan’ Andriamanitra manokana ny fanovana antsika, fa tsy ezak’olombelona akory « izay hanova ny tenan’ny fietren-tenantsika ka hitovy endrika amin’ny tenan’ny voninahiny , araka ny fiasan’ny heriny , izay hahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho Azy » (Fil 3.21).
2-Mpandresy mandrakizay isika
Ny fahafatesana no fahavalo farany tsy maintsy horesena. Ny dikany : ho avy tokoa ny fitsanganan’ny vatana ho velona . Tsy hanankery intsony ny fahafatesana fa ho resen’i Kristy tanteraka izy , ka tsy hoe i Kristy ihany no nitsangana tamin’ny maty, fa ny maty rehetra koa dia hitsangana avokoa. Ary rehefa hatafin’ Andriamanitra antsika ny tenan’ny tsi-fahafatesana dia ho MPANDRESY MANDRAKIZAY ISIKA (vakio 15.54-57).
« Koa amin’izany ry rahalahiko malalako , dia miorena tsara , aza miova ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo , satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina oa amin’ny Tompo » 1 Kor 15.58).